Fiba 3×3 – Mada 2016 : hahazo 500.000 Ar ny voalohany | NewsMada
Fiba 3×3 – Mada 2016 : hahazo 500.000 Ar ny voalohany
Mazava. Araka ny nambaran’ny federasiona malagasin’ny basikety (FMBB) sy ny orinasa Telma, mpanohana voalohany ny basikety malagasy, hotoloran’izy ireo lelavola 500.000 Ar ny ekipa tafavoaka tompondakan’i Madagasikara eo amin’ny Fiba 3×3, sokajy +18 taona. 250.000 Ar kosa ho an’ny ekipa tompondaka eo amin’ny U18.
Araka ny efa fantatra, hotanterahin’ny federasiona miaraka amin’ny kaomisiona mpikarakara (Rasaony Pascal, Rabenjamina Fanja, Randrianarisoa Rina), ny faran’ny herinandro izao, etsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina, ny fiadiana ny tompondaka nasionaly andiany voalohany eo amin’io Fiba 3×3 io.
Ankoatra izay, voalaza fa ekipa 20 no indray hiady ny lohany amin’ity indray mitoraka ity ka ny valo amin’izy ireo, avy eto Analamanga avokoa, ny folo, avy amin’ireo ligim-paritra hafa ary ny roa, avy any Ambohidratrimo. Hangotrana, araka izany, ny fihaonana.